Arduino Yún, oo ah guddi si xorriyad leh ugu soo gala Internetka Waxyaabaha | Qalabka bilaashka ah
Internetka Waxyaabaha ama sidoo kale loo yaqaan IoT wuxuu isbeddelay adduunka tikniyoolajiyadda sidoo kale wuxuu gaadhay in badan oo ka mid ah mashaariicdeenna (haddii aan rabno ama aan rabin). Taasi waa sababta isticmaaleyaal badani u raadinayaan guddi ka shaqeeya barnaamijyadooda, taasi waa mid qaali ah oo waliba ku xirta internetka iyadoon la isticmaalin fure wireless ama kaarka shabakadda. Qaar badan, tan dambe waa xallin deg deg ah, laakiin macnaheedu maahan inay tahay xirfad ama xal wax ku ool ah.
Marka tan la eego, kooxda Mashruuca Arduino wuxuu soo saaray guddi loogu talagalay internetka waxyaabaha. Guddigan waxaa lagu magacaabaa Arduino Yún.
1 Waa maxay Arduino Yún?
2 Maxay ku kala duwan yihiin Arduino Yún iyo Arduino UNO?
3 Waa maxay Openwrt-Yún?
4 Sidee loo helaa qaabeynta Arduino Yún?
5 Maxaan ku samayn karaa Arduino Yún?
Waa maxay Arduino Yún?
Arduino Yún waa guddi ka socda Arduino Project. Tani waxay ka dhigan tahay in nashqadeyntiisa iyo soosaarideeda ay fulin karto nafteena ama shirkad waliba sidoo kale inay awoodaan inay adeegsadaan naqshadooda si ay u abuuraan noocyo iyo taarikada shaqsiyadeed. Xaaladda Arduino Yún, tan dambe waxay noqon doontaa tallaabo dheeraad ah, maaddaama ay ku saleysan tahay Arduino Leonardo, oo ah qaab ka awood badan guddiga Arduino UNO.
Arduino Yún wuxuu leeyahay naqshad isku mid ah iyo isla kontoroolaha sida Arduino Leonardo, taasi waa processor-ka Atmel ATmega32U4. Laakiin, si ka duwan Arduino Leonardo, Arduino Yún wuxuu leeyahay Atheros Wireless AR9331 mini-board, booska loogu talagalay kaararka microsd-ka iyo xudunta loo yaqaan Linino.
Maxay ku kala duwan yihiin Arduino Yún iyo Arduino UNO?
Iyadoo la tixgelinayo waxa kor ku xusan, farqiga u dhexeeya qaabka Arduino Yún iyo tusaalaha ayaa cad Arduino UNO. Laakiin qaar kale ayaa jira.
Haddii aad eegto maqaalka aan dhawaan daabacnay, guddiga Arduino waxaa ka maqan cunsurro badan oo looxyo kale sida Raspberry Pi ay leeyihiin, laakiin Arduino Yún ma haysto.
Muhiimka loo yaqaan Lininus waa udub-dhexaad bixiya awood ku filan haysato qaybsi yar oo la yiraahdo Openwrt-Yún. Qaybintaani waxay adeegsaneysaa kernel-ka Linux iyo aalado kale oo yar oo sameeya Openwrt ayaa lagu rakibi karaa qalab kasta oo leh loox atheros ama wixii la mid ah.
Waa maxay Openwrt-Yún?
Waqtigan xaadirka ah, waa ku habboon tahay in la sameeyo joogsi kooban oo ku saabsan waxa Openwrt-Yún yahay iyo sababta ay muhiim u tahay.
OpenWRT Waa qeybinta Gnu / Linux oo ku habboon router iyo kaar wireless ah. Kiiskan, Openwrt-Yun waa qaybsi wax ka beddel lagu sameeyay oo lagu rakibayo Arduino Yún. Qaybinta waxay ku nooshahay Linino waana la ballaarin karaa iyada oo loo mahadcelinayo booska loogu talagalay kaararka microsd. Si aan u awoodno adeegsiga shaqooyinkan, waa inaan kaliya ku xirnaa guddiga meel fog iyadoo loo marayo ssh oo aan u adeegsanno maareeyaha xirmada qaybinta iyo sidoo kale qalabka intiisa kale.
Baahnayn in la sheego, qaybintaan waxay na siin doontaa qaar ka mid ah howlaha caqli-gal ah ee aasaasiga ah ee nidaamka qalliinka uu leeyahay laakiin uusan la mid ahayn kan loo yaqaan 'Raspberry Pi board' taas oo loo isticmaali karo minicomputer ama pc duug ah oo aan u adeegsan karno adeege ahaan ama qeyb kamid ah kutlada.
Sidee loo helaa qaabeynta Arduino Yún?
Si loo helo qaabeynta Arduino Yún, waa inaan qaadnaa laba tallaabo oo tixgelin ah:
Ku rakib wadayaasha si ay u aqoonsan tahay pc-ga leh Arduino IDE
Ku habeeyo is-dhexgalka fog ee isku xirnaanta iyo tallaabada "buundada" ee barnaamijyada shaqsiyeed si aad u isticmaasho isugeynta wireless-ka.
Tallaabada ugu horreysa waa muhiim maadaama mar uun aan u baahan doonno inaan barnaamijyo iyo xog u dirno guddiga Arduino Yún. Tan awgeed waa inaan kaliya rakibi darawallada guddiga ka dibna socodsiiya Arduino IDE. Haddii aan hayno Arduino IDE oo ku saabsan Gnu / Linux, wax dhib ah ma lahan doono tallaabadan mana ahan inaan sameyno wax; Haddii aan leenahay Windows, darawallada moodalkan iyo sidoo kale moodellada kale ee Arduino ayaa lagu rakibi doonaa Arduino IDE, markaa muhiimadda ay leedahay adeegsiga IDE-kan; Haddayna haysanno mac OS, maahan inaan wax uun qabanno haddii aan adeegsanno Arduino IDE, laakiin markii ugu horreysay ee aan ku xirno guddiga Arduino Yún iyo Macgeena, ayaa waxaa soo muuqan doona saaxir rakibaadda kumbuyuutarka, oo ah saaxir aan ku xirnaan doonno leh badhanka cas. Waa dhibaato muuqata oo ka muuqata bogga rasmiga ah ee Arduino Yún.
Tallaabada kale ee aan xiiseyneyno inaan ogaano waa isku xirnaanta iyo maamulka Arduino Yún Wi-Fi module. Marka hore waa inaan siino tamar saxanka; tani waxay sababi doontaa in guddiga uu abuuro shabakad wifi ah oo la yiraahdo Yún. Waxaan ku xirnaa shabakadan iyo tan biraawsar ayaan qoreynaa cinwaanka http: //arduino.local Cinwaankani wuxuu furi doonaa degel aan ka maamuli karno shabakadda cusub ee la abuuray. Magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee guddidani waa "arduino", erey aan badali karno markaan galno gudida.
Laakiin, haddii aan isticmaalno Arduino Yun, waxa aan raadin doonno waa inaan ku xirno shabakad Wi-Fi oo aan abuurin shabakad noo gaar ah. Si tan loo sameeyo, gudiga la furay, xagga hoose waxaa ku jira hoos-u-dhac leh walxaha ku xirmaya wixii shabakad Wi-Fi ah, marka laga reebo shabakadaha jaamacadaha iyo shabakadaha kale ee la midka ah ee isticmaala borotokoolka iyo software-ka sirta ah ka dhig wax aan macquul aheyn (wali) isku xirnaanta taarikada noocan ah.
Hagaag, waxaan horeyba u ogaanay sida loo abuuro shabakad Wi-Fi u gaar ah, ku xirnaato shabakad kale oo Wi-Fi ah, laakiin sidee baan ugu isticmaali karaa xiriirkan golayaasha kale iyo / ama barnaamijyada?
Waa hagaag waa inaan ku isticmaalnaa howlaha Bridge Bridge barnaamijka aan ka abuurnay Arduino IDE. Shaqadu waxay ku bilaabmaysaa Bridge.begin (), shaqeyn noo oggolaan doonta inaan la xiriirno shaqada caadiga ah iyo shaqada wireless-ka ee guddiga Arduino Yún.
Maxaan ku samayn karaa Arduino Yún?
Iyada oo la adeegsanayo barnaamijyada lagama maarmaanka ah, waxaan ka dhigi karnaa aalad kasta oo tiknoolajiyadeed "caqli" mahadnaqa guddiga Arduino Yún. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu caansan waa in loo isticmaalo sabuuradda si qalabka loo abuuray uu ugu xirmo internetka iyo inaad awood u yeelatid inaad ku maareysid aalad kale sida taleefannada casriga ah, kiniin ama kombuyuutar.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaashu waxay ku guuleysteen inay u adeegsadaan guddiga sidii kaar shabakad dhif ah, laakiin waa inaan dhahnaa in tan la sameeyo ay aad u adagtahay oo qiimaha guddiga uu ka sarreeyo kaararka shabakadda ee caadiga ah. Daaran Tilmaamaha waad heli kartaa taageere yar oo ah waxa lagu qaban karo Arduino Yún. Kaliya waa inaan ku qornaa magaca guddiga mashiinka raadinta keydka iyo mashaariic kala duwan oo adeegsanaya qaabkan ayaa soo muuqan doona.
Arduino Yún waa guddi xiise leh oo muhiim u ah adeegsadayaal badan maxaa yeelay illaa imaatinkiisa, qofkii doonaya inuu ku xiro mashruuciisa internetka waa inuu iibsadaa guddiga Arduino oo lagu daray silig ama GSM gaashaan oo u oggolaanaya isku xirnaanta. Qiimuhu wuu ka badnaa Arduino Yún iyo barnaamijkii aadka u adkaa ee xaddidan. Arduino Yún ayaa waxaas oo dhan hagaajinaya wuxuuna siinayaa suurtagalnimada in la abuuro aalado fudud oo ka awood badan tan hadda. Laakiin mashruuceenu wuxuu kufiicnaan karaa kuwa kale ee kale sida Raspberry Pi Zero W. Xaalad waliba ha noqotee, Arduino iyo Raspberry Pi labaduba waxay raacaan tilmaamaha Qalabka Bilaashka ah taasna waxay ka dhigan tahay inaan dooran karno guddiga iyo xalka annaga oo aan arkin mashruucayaga waxyeellay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Arduino Yún, oo ah guddi si xorriyad leh ugu soo gala Internetka Waxyaabaha
Waa salaaman tahay, Abriil 24, 2018, saxankan wuxuu u muuqdaa inuu dib uga laabtay soo-saaraha, iyadoo loo maleynayo inay u hoggaansami weyday xeerar kasta.
Waxa iga xanaaqay ayaa ah in gaashaanka yun uu ku haysto buugga.
Waxaan ka tagayaa xiriirka: https://store.arduino.cc/arduino-yun
Waxaan raadinayaa baddel mashruucayga, waan ku qanacsanahay wixii talo soo jeedin ah.
Salaan iyo mahadnaq booska.
Ku jawaab xtrak
Ku abuur mashiinkaaga arcade adiga oo adeegsada Raspberry Pi